UKUKHULUZA KWABANTU HORMONE ENTHAILAND 100% UMSEBENZI WEMPILO
Singummemezeli osemthethweni weemveliso zeHGH eThailand. Senza ukuhanjiswa kwamazwe ngamazwe kuwo onke amazwe. Zonke iimveliso zethu zinesatifikethi somgangatho, umyalelo kunye neelayisensi. Biza ngoku okanye i-WhatsApp + 66 94 635 76 37 (Sebenzisa i-WhatsApp Fumana i-2% Isaphulelo)
IIMISEBENZI EZIZINTLOKO ZAMARCH! I-HGH EKHONA KWI-THAILAND IGENOTROPIN GOQUICK IPEN 36 IU "KUFUNA"
19.99 ฿ Iphutha lotywala: inombolo engalunganga yeengxoxo (unikezwe i-3, kulindeleke i-1..2)
I24 / 7 INKXASO YOKUSEBENZA KWAMASEBENZI NOKUXHUMANA KWAMASEBENZI KUNYE NOKUBHALWA KWEZINDAWO
Inkonzo yamakhasimende kunye nokukhawuleza, sisoloko silungele ukunika iingcebiso kwizigulane zethu kwaye siphendule yonke imibuzo malunga nokunyanga kwe-hormone, unyango, ikhosi, ukuhanjiswa, amaxabiso kunye nokuhlawulwa, unokunika umyalelo ngomcebisi. Nceda ugcine inombolo yethu yefowuni + 66 94 635 76 37
Sebenzisa i-WhatsApp Get 2% Discount
SISEBENZISA ISICELO SOKUPHAKWA KWE-MOBILE UKUHLOLA KWE-5% ISIFUNDO
Isicelo sihlala kunye nawe, senza lula kwaye siphumelele inkqubo yolawulo. Khuphela ngoku ngoku ukusuka kwi-iTunes ezisemthethweni uze ufumane isaphulelo se-5%.
Khuphela kwi-App Store
- Ndiyabonga kakhulu, uncedo lomthengi olungileyo. Ivenkile ethembekileyo. I-Ordered kunye nomhlobo we-8 amaphakheji, isitolo senze isaphulelo esihle kakhulu. Ndisoyika kakhulu ukuthumela imali. Kodwa emva kwengxoxo sithumele imali kwi-akhawunti yebhanki yesitolo. Umyalelo ofunyenweyo kwiintsuku ze-3! Isitolo esihle kwaye sinyanisekileyo, siyabonga!
Ndiyabulela, ncitshitshisiwe, ke uthumele imali kwi-akhawunti yebhanki, i-hormone yokukhula ifike kwiintsuku ze-4 e-Chiang Mai
Ndiyonwabile kakhulu ukuthetha ukuba namhlanje i-genotropin ipeniti ngokukhawuleza ifike ngeposi. Ndandimangalisile ukuba yenziwe ngamasiko kodwa ndivuyiswa kakhulu kakhulu
Singabamagcisa ophando kunye nabasabalawuli beemveliso zeHormone eHormone kumazwe athile kuquka neThailand. Inkampani yethu yinkampani yokuqala eThailand enokuqinisekisa ukuba umgangatho ogqithiseleyo kwaye uphumelele nge-FREE HGH. Sinokubonelela ngokuthumela izithuthi kwiintsuku ezimbalwa ukuya eThailand.
Iqela lethu liqulethwe ngabantu abaye basebenzisana nemveliso yokuguga iminyaka emininzi, ngakumbi i-HGH. Uphando lwethu olude luye lwabonisa ukuba namhlanje zikhona iimveliso ezininzi ze-HGH ezikhohlakeleyo kwi-Intanethi, kuquka i-HGH yesiqhelo esuka eChina. Ngenxa yoko, sakha ubudlelwane obude kunye nabavelisi beempawu ezidumileyo ukubonelela abathengi bethu iimveliso zeHGH zangempela kwixabiso leHGH. Iimveliso zethu zinyani, zikhuselekile kwaye zichanekile kwaye zivunyiwe yi-FDA (Ukutya kunye noLawulo lweDrug) kumazwe amaninzi.
UKUKHULULWA KWEPHAKATHI KWONKE AMAGAMA ENTHAILAND
Ukuvakalisa ukuhanjiswa kunye nentlawulo yemali eBangkok. Sithumela i-growhormone nge-Air Cargo e-Chiang Mai, ePhuket. Bhengeza i-mail ku-Pattaya, iHua Hin, i-Udon Thani, i-Koh Samui, i-Koh Chang, i-Suratkhani kunye nayo yonke imizi kunye namaphondo aseThailand. I-9: I-00 ntambama iya kuhanjiswa nge-sameday.
HGH yangempela kwiPfizer premium quality - Beka umyalelo ngoku!
Sinika ukunikezelwa ngamazwe ngamazwe kuwo onke amazwe ehlabathini ngokusebenzisa inkonzo yeposi ye-UPS, kuthatha iintsuku ze-2-3. Siqinisekisa ukuthunyelwa e-Australia, eU.SA, eCanada, e-United Kingdom, eRashiya naseYurophu. Amazwe aseMbindi Mpuma ahlawule, i-Saudi Arabia, i-United Arab Emirates kunye namanye amazwe
INDLELA YOKUSEBENZISA HGH
I-HGH yesigqeba esisigqirha yiyo:
I-3 IU (0.9 mg) amadoda amadoda aneminyaka eyi-30 enesisindo esisuka ku-80-120
Kungcono ukwenza injini kusasa ngaphambi kokutya kwasekuseni kwisisu esingenanto okanye emva kokutya kweeyure ze-2 emva kokutya ngaphambi kokulala (njengoko kubonisa ukuba, ukwahlula umyinge wemihla ngemihla kunika umphumo ofanayo kunye ne-1 injection ngosuku)
Ikhosi epheleleyo ihlala kwiinyanga ze-6 ukugqiba umphumo opheleleyo womzimba wamaphupha akho! Ithathe iHGH ngeentsuku ze-6 ngeveki ngoMvulo-ngoMgqibelo (ngekhefu ngekhefu) Ikhosi ye-6 inyanga ihlukaniswe kwiindawo ze-2 - iinyanga ze-3 iintsuku ze-6 ngeveki, emva kwexeshana ii-30 iintsuku, kwakhona iinyanga ze-3 iintsuku ze-6 ngeveki
I-HGH UKUQHUBEKA NGOKUBHALA
Ikhondo lonke le-HGH akufanele lidlule iinyanga ze-6. Ngeli xesha, ngokweengcali, ukulahlekelwa isisindo kulahlekelwa iipilisi ezingama-2 zeoli kunye nokufumana ii-2 iipounds ze-muscle ngenyanga, ngaphandle kokutya kunye nokuzivocavoca. Kodwa ebaluleke kakhulu, umphumo wezenzo ezijoliswe ekugqibeleni ubunzima obuninzi, ziya kukhuliswa kakhulu. Ngoko, iziphumo eziqhelekileyo zokulahlekelwa kwesisindo kwi-hormone yokukhula yinto enomdla ngakumbi kunosayensi.
IiHormones azikho iziyobisi. Zizinto zendalo ezibalulekileyo kwimpilo yakho. Njengoko uneminyaka yobudala, ukuveliswa kwe-hormone yakho iyancipha ngokukhawuleza, okukhokelela ekukhawulezeni inkqubo yokuguga kunye nokuqala kwezifo ezihlobene neminyaka. I-hormone yonyango yokutshintsha indawo ibuyisela umzimba wakho kumanqanaba ayo omtsha amahomoni ngokuwabuyisela kumanqanaba omzimba wakho owawujwayele kwiminyaka yawo emncinci. Izikhokelo zabaqalayo: - Qala nge-2IU imihla ngemihla ngaphambi kokulala (isisu esingenanto). - iintsuku ze-5 kunye neentsuku ze-2. - Siyacetyiswa ukuba utshintshe ixesha leMasa / ngoBusi (iinyanga ezimbini).
YINI I-HGH BOX?
I-HGH Ibhokisi ibonelelo elide elide lomgangatho womntu ukhula i-hormone ngezidingo zakho. Nge-HGH Ibhokisi unokufumana iimveliso zangempela ze-HGH kunanini ngaphambili! Ukuba unokufumana i-HGH esincinci kwixabiso elifanayo kunye nomgangatho, siya kukunika isaphulelo esongezelelweyo. Iindaba ezimnandi! Ngoku unako ukuyala iHGH eThailand.
Inzuzo yebhokisi yeHGH:
- Ukuhanjiselwa ngenqanawe mahala
- Ufumana inani elaneleyo, elaneleyo kumjikelezo we-1
Ixabiso eliphezulu kwiimveliso zeHGH kwimarike
- Iimali Eziqinisekisiweyo Zemali Ukuba awufumani imveliso yakho
HLAWULA KUFAKE HGH!
Asifuni ukuba abathengi bethu bachithe imali kwizinto ezingasebenzi, kwaye kwimeko enzima kakhulu ibangela ingozi enkulu kwimpilo. Ngenxa yoko asikhuthazi ukuthengwa kwemveliso yeHGH. Imveliso yethu ayigunyazisiwe kuphela yi-FDA kodwa nayo iyona nto iyona nto inamandla kakhulu ekuhlaleni iHorm Growth hormone ekhoyo kwiimarike namhlanje, ngokutsho kwe-IMS, iqumrhu elithengisiweyo lokuthengisa. I-HGH iqulethe i-Somatropin, eyimichiza eveliswa ngokwemvelo emzimbeni womntu, eyakhiwe ngokulandelelana kwe-191 amino acid.
Iimveliso zethu ze-HGH ziveliswa ngabaphathi beemarike ngokupheleleyo ezifana neAnkeBio, GeneScience Pharmaceutical and Pfizer ezinokuqinisekisa abathengi ngeenkqubo ezisemthethweni nezobuqhetseba bokulwa nobuqhetseba bokuqinisekisa i-HGH yangempela kwi-intanethi.